नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानद्वारा ७ जना स्रष्टा सम्मानित - Hamar Pahura
नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानद्वारा ७ जना स्रष्टा सम्मानित
मंगलबार, चैत्र १५, २०७८ २२:०७:५६
काठमाडौं, चैत १५ गते । नेपाली साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान गोदावरी कैलालीले विभिन्न स्रष्टाहरुलाई सम्मानित गरेको छ । सो संस्थाले मंगलबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित पुरस्कार समर्पण कार्यक्रममा ७ जना स्रष्टाहरुलाई सम्मानित गरेको हो ।
महाकाव्यकार तथा वरिष्ठ साहित्यकार मनिराज जोशीद्वारा स्थापित एक लाख रुपियाँ राशीको ‘मनिराज जोशी बाङमय पुरस्कार २०७५’ बाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सोही पुरस्कार २०७६ बाट वरिष्ठ साहित्यकार डा. तुलसी भट्टराई पुरस्कृत हुनुभयो ।
उहाँहरु दुवैलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले सम्मानपत्रसहित पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभयो । सोहीअनुसार गोदावरी प्रतिभा पुरस्कार २०७५ बाट पूर्वमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटा, खप्तड स्वामी सत्चितानन्द सरस्वती पुरस्कार २०७५ बाट स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती स्वामी, प्रा.डा. रामचन्द्र भट्ट शास्त्री देवराज आचार्य पुरस्कार २०७५ बाट सम्मानित हुनुभयो । त्यस्तै, भरतराज पौडेललाई शास्त्री देवराज आचार्य पुरस्कार २०७५ र खडगबहादुर प्रतिभा पुरस्कार २०७५ बाट साहित्यकार तथा पत्रकार लक्की चौधरी पुरस्कृत हुनुभयो ।
पुरस्कृत हुने स्रष्टालाई पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा प्रतिष्ठानका कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले संयुक्तरुपमा पुरस्कृत गर्नुभयो । चारवटै पुरस्कारको राशी जनही १० हजार रुपियाँ र सम्मानपत्र रहेको छ । सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री चन्दलाई ८४ औं वसन्त टेक्दै गर्नुभएको पूर्वसन्ध्यामा संस्थाले अभिनन्दित गरेको छ ।
सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री चन्दले साहित्यले समाजको वर्तमान, भूत र भविष्यको चित्र देखाउने हुनाले साहित्यलाई समाजको दर्पण भनिएको चर्चा गर्नुभयो । आत्मा नभएको शरीर जसरी मृततुल्य हुन्छ, समाजमा साहित्य, कला र संगीत नभएमा समाज पनि निरश र मृततुल्य हुने उहाँले बताउनुभयो । साहित्यको उत्थान र श्रीबृद्धिमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले स्रष्टालाई सम्मान गर्नु भनेको लेखनमा थप उत्प्रेरित गर्नु हो भन्नुहुँदै यसले लेखक तथा द्रष्टालाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साहित्यको श्रीबृद्धिमा गोदावरी कैलालीस्थित प्रतिष्ठानले पुर्याएको योगदानको उहाँले प्रसंशा गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका सल्लाहकार मनिराज जोशीले सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं आएर पुरस्कार वितरण गर्न केही कठिनाई भएपनि सबैको सहयोग र सदभावले सफलता मिलेको बताउनुभयो । कार्यक्रम सफल बनाउन भूमिका खेल्नुहुने व्यक्तित्व, कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा साहित्यकार पदमराज जोशीले आफूहरु कैलालीको गोदावरीमा रहेर नेपाली वाङ्मय साहित्यको श्रीबृद्धिका लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । यसअघि गोदावरीमा धार्मिक कुम्भमेला आयोजना गरेर लाखौं भक्तजनलाई सहभागी गराएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा पुरस्कृत व्यक्तित्व दीपकप्रसाद बास्कोटा लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा साहित्यकार डा. तुलसीप्रसाद भट्टराईद्वारा लिखित ‘सुनेको चीन देखेपछि’ कृति लोकार्पित गरिएको छ ।